News | रेलमार्ग
News | Tag: रेलमार्ग
काठमाडौँ । सरकारले रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको घोषणा गरेका हुन् ।
जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गका लागि ४५ पदमा २२६ दरबन्दी
काठमाडौँ । सरकारले निकट भविष्यमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेल्बे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बर्दिवास । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा बर्दिवास—जनकपुर—जयनगर रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
काठमाडाैँ-केरूङ रेलमार्गकाे डिपिआर ६ महिनाभित्र
काठमाडौँ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिमकतामा राखेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग : सम्भाव्यता अध्ययनकाे लागि मात्रै ३५ अर्ब लाग्ने
काठमाडौँ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करीब रु. ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
काठमाडौँ । कूल १३६ किलोमिटर लामो निजगढ, हेटौँडा– भरतपुर रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि रेल विभागले आशयपत्र माग गरेको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि सर्भेक्षणको काम अन्तिम चरणमा
कञ्चनपुर । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने कार्यअन्र्तगत घरधुरी सर्भेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
एक दर्जनभन्दा बढी रेलमार्ग निर्माणका विभिन्न चरणमा
काठमाडौँ । सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमकिताका राखी निर्माण अगाडि बढाएको छ ।
भारतसँगको पाँच सीमालाई रेलमार्गले जोड्न छलफल शुरु
नेपालगञ्ज र भैरहवा
काठमाडौँ । भारतसँग सीमा जोडिएका पाँच वटा नाकालाई रेलमार्गले जोड्ने विषयमा नेपाल र भारतका रेल अधिकारीबीच छलफल शुरु भएको छ । छलफलका लागि भारतीय रेल अधिकारीको समूह आइतबार नेपाल आएको थियो । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवासम्म सामान ढुवानीका
सात वर्षमा काठमाण्डाैमा रेलमार्ग सञ्चालन हुन्छ : महासचिव विष्णु पाैडेल
बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले ढिलोमा सात वर्षमा काठमाण्डौमा रेलमार्ग सञ्चालन हुने बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण उत्साहजनक भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै परिणामस्वरूप रेलमार्ग निर्माणको आधार तयार भएको उनले बताए ।